महानायक हमालले किन गरेनन मतदान ? - Reportersnepal
महानायक हमालले किन गरेनन मतदान ?
लोकतन्त्रमा निर्वाचन सुन्दर पक्ष हो भने मतदान लोकतन्त्रलाई बचाउने अभिन्न अंग हो । देश विकास र परिवर्तनको पक्षधर नेपाली नागरिकले आफ्नो मत उचित व्यक्तिलाई दिएर कर्तव्यावान नागरिकको परिचय दिनबाट चुक्नु हमालका लागि नैतिक प्रश्न हुनसक्छ ।
लोकप्रिय नायिका रेथा थापाले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ पशुपति क्याम्पस मतदानकेन्द्रमा मतदान गरेकी छन् । उक्त क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट डा. राजन भट्टराई र काग्रेसँका तर्फबाट यूवानेता गगन कुमार थापा मैदानमा छन् ।